China MTU Generator Series mpanamboatra sy mpamatsy | Xinneng
MTU dia iray amin'ireo mpanamboatra milina diesel lehibe manerantany miaraka amin'ny tantarany dia azo zahana hatramin'ny 1909. Miaraka amin'ny MTU Onsite Energy, MTU dia iray amin'ireo marika voalohany amin'ny Mercedes-Benz Systems ary io hatrany no lohalaharana teo fandrosoana ara-teknolojia. MTU Engines no motera mety hitondra fiara mandeha amin'ny gazoala.
Manasongadina ny fanjifana solika ambany, elanelam-potoana lava ary ambany ny entona fandefasana lasantsy Sutech MTU dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fitaterana, tranobe, telecom, sekoly, hopitaly, sambo, tanimbary ary angovo indostrialy mamatsy faritra sns.
Ny Parameter teknika lehibe
Toraka * tapaka lalan-dra
Modely miaraka amin'ny "E" dia genset herinaratra mijanona;
Sina 0 # diesel maivana na avo kokoa no recomnamboarina ho an'ny sutech gensets miaraka amin'ny rano fisarahana solika mba hahazoana antoka ny fahadiovana solika.
Soso-kevitra ny handray API CF na menaka avo kokoa, temperature / viscosity an'ny 15W-40
Ity latabatra masontsivana ity dia ho an'ny referansa fotsiny ary tsy misy fampandrenesana intsony raha manana fiovana.
Teo aloha: GCK, GCL Low Voltage tsy azo alaina switchgear
Manaraka: Perkins Generator Series
Diy mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro
Generator an'ny trano misy herin'ny masoandro
Generator Solar Ao An-trano manontolo